Windwo7 အတွက် Defreeze 7
Posted by : ကိုထက် Monday, September 5, 2011
တောင်းဆိုထားတဲ့ ညီလေးတွေရှိလို့ပါ . နောက်ဆုံးထွက်လေး ရှာပေးထားပါတယ် . window7နဲ့ ကိုက်မယ့်ဟာလေးပေါ့ . အထဲမှာ ၂ မျိုးပါပါတယ် . တစ်မျိုးနဲ့ အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်မျိုးနဲ့တင်ပါ. key ချင်းမတူပါဘူး. ဒီနေ့နည်းနည်းအားနေတော့ တစ်ခုတော့ပြောပြချင်ပါတယ် . မနေ့ကလဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်က မေးလို့ပါ. defreeze ကြောင့် ပျက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေကို back up လုပ်လို့ရ သလားတဲ့. ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ မေးတတ်တယ် . လုံးဝမရပါဘူး. မရတဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြပါ့မယ်. Defreeze ဆိုတာက HDD ကို lock ချလိုက်တဲ့ program ပါ . ကွန်ပျူတာ system အားလုံးအပါအ၀င် HDD တစ်ခုလုံးကို Lock ချလိုက်တာပါ. C:/ and D:/ နှစ်ပိုင်းမှာ ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းကို Lock ချလို့ရပါတယ် . အဓိကက C:/ ကို ချတာများပါတယ် . ဘာလို့လဲဆိုရင် software, window system တွေ Driver တွေအားလုံးကို C:/ ထဲမှာ အားလုံးသိမ်းထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ. ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ defreeze ကို ပိတ်ထားရဲ့သားနဲ့ program တွေကို ဘာလို့ Install လုပ်လို့ရပြီး ကွန်ပျူတာ ပိတ်လိုက်ရင် ဘာလို့ပျောက်သွားတာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ် . ကွန်ပျူတာဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ တင်သမျှ program နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို DHH(ဟက်ဒစ်) ထဲကနေ အလုပ်လုပ်ပြီး save လို့မရပါဘူး. အဲ့အချိန်မှာ လုပ်သမျှအလုပ်အားလုံးက Ram ပေါ်ကနေ အလုပ်လုပ်နေတာပါ. Ram ဆိုတာက virtual memory ပါ. မီးပေးထားရင် အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်. မီးပျက်သွားရင် ram ပေါ်မှာ တင်ထားသမျှ အရာအားလုံးက ပျက်သွားမှာပါ. အဲ့တော့ ဘာလို့ restart ကျသွားရင် program တွေကို ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် defreeze က ကာကွယ်ထားတာကြောင့်မို့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Defreeze install လုပ်ပြီး program ကို ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မူလအတိုင်း ပြန်ရောက်သွားရတာပါ. Defreeze ကို window7အတွက် အဆင်မပြေသူများအောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. ဟိုတစ်ရက်ကမေးတဲ့ညီလေးလဲ အခုလောက်ဆိုရင် နည်းနည်းလောက် နားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်.
ကိုညီနေမင်း ဆီမှတိုက်ရိုက် SHARE ထားပါသည်။
Download Mediafire | Download ifile.it | Download megaupload | Download zshare | Download rapidshare | Download hotfile | Download ziddu | Download easy-share | Download depositfile | Download filesinic | Download wupload